အတိုင်ပင်ခံ Directory ကို
Sarcoidosis နှင့် The မျက်လုံး
Sarcoidosis နှင့်ပူးတွဲ, ကြွက်သားများနှင့်အရိုး
တစ်ဦး Support Group မှကိုရှာပါ
SarcoidosisUK Timeline ကို
SarcoidosisUK အောင်မြင်မှုများ 2018
SarcoidosisUK အောင်မြင်မှုများ 2017
သင်တို့သည်ငါတို့၏ SarcoidosisUK သုတေသနအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူလျှင်, ငါတို့သည်သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အပြည့်အဝတာဝန်ယူဖြစ်ကြသည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ကုသပါလိမ့်မည်ကိုမည်သို့နားလည်ရန်အောက်ပါမူဝါဒအကိုဖတ်ပါ။
The terms of this policy may change to reflect the changing activities and services of the charity. Please check it from time to time. We last updated the policy in May 2020.
If you have any queries about this policy please contact: The Data Protection Officer (named below), SarcoidosisUK, 214 China Works, 100 Black Prince Road, London, SE1 7SJ, or email info@sarcoidosisuk.org.
ဤမူဝါဒများ ICO နှင့်တိုင်ကြားမှုမိတ်ဖက်ထံမှအကူအညီနှင့်အတူဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေအားဖြင့်အကြောင်းကြားသည်။ ဒါဟာအထွေထွေဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေ (GDPR) နှင့်ဒေတာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေနှင့်အညီ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းကိုကြည့်ပါ SarcoidosisUK ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ ကျမတို့ကလည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဒေတာများပြုမူဆက်ဆံဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်များအတွက် မဟုတ် SarcoidosisUK သုတေသနနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်။
ကျနော်တို့က 'SarcoidosisUK သုတေသန' 'အားဖြင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို
ကျနော်တို့က 'SarcoidosisUK သုတေသန' 'အားဖြင့်ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ
SarcoidosisUK Research means any research which is authored, conducted and promoted by SarcoidosisUK, either alone or in partnership with external academic or research bodies (our Trusted Research Partners). SarcoidosisUK Research may be conducted either online or in print, but is generally administered through our website at www.sarcoidosisuk.org/researchsurvey/.
It may include the following:
ကနျြးမာရေးအဆင့်အတန်းအတိုင်းအတာများနှင့်အခြားတိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကဲဖြတ် tools များ
ဤမူဝါဒ မ အဆိုပါ SarcoidosisUK-BLF Sarcoidosis သုတေသန Grant ကစီမံကိန်းများအောက်မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သင်တန်းသားများကိုဖုံးလွှမ်း။ အဲဒီစီမံကိန်းတွေကြောင့်စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်ကိုမဆိုသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ၏မူဝါဒများဘာသာရပ်များမှာ - အသေးစိတ်တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ဤမူဝါဒ မ သုတေသနတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖုံးသင်တန်းသားများကိုဥပမာ NHS လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေသို့မဟုတ်ဥရောပအဆုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှစစ်တမ်းများအဘို့, SarcoidosisUK website တွင်ပြင်ပလင့်များမှတဆင့်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သငျသညျခြောနှငျ့သငျ SarcoidosisUK သုတေသနအတွက်ပါဝင်လျှင်ထွက်ရှာတွေ့ချင်ပါတယ်လျှင်, ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအရာရှိကိုအောက်တွင်အမည်ရှိဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် Sensitive - ငါတို့သည်စုဆောင်းစေခြင်းငှါသတင်းအချက်အလက်နှစ်ခုကိုအဓိကမျိုးရှိပါတယ်။ အခြားမည်သည့်အချက်အလက်များကိုသီးခြားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည် ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ SarcoidosisUK ။ SarcoidosisUK သာတိကျသောအဘို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနှင့်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များ: သတင်းအချက်အလက်ဆန္ဒအလျောက်ထုတ်ဖော်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင် SarcoidosisUK ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်သည်ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းမထားဘူး။ ကျနော်တို့စုဆောင်းအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်သည်သင်၏အမည်, မွေးသက္ကရာဇ်, အီးမေးလ်လိပ်စာ, အိုင်ပီလိပ်စာ (အင်တာနက်ပရိုတိုကောလိပ်စာ), စာတိုက်လိပ်စာသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအသက်အရွယ်နှင့်လူမျိုးစုအဖြစ်အချို့သောလူဦးရေအချိုးအစားအသေးစိတျပါဝင်နိုင်သည်။
အထိခိုက်မခံပြန်ကြားရေး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနပို့ချခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းသင်၏ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. ထိခိုက်မခံတဲ့, အထူးသဖြင့်သတင်းအချက်အလက်အဖြစ် data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေဖြင့်အသိအမှတ်ပြုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အကြောင်းပြချက်လည်းမရှိသည့်အခါသာထိခိုက်မခံတဲ့သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးသုတေသနစီမံကိန်းကိုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူရွေးချယ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သငျသညျအထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်မျှဝေချင်ကြဘူးကြောင်းဆုံးဖြတ်ကြလျှင်, သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကသင့်ရဲ့ပါဝင်မှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော, 'သငျ့ခငြ့်အရေး' 'ကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနကရောဂါများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းကိုရှာနောက်ဆုံးမှာ sarcoidosis လူနာအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်မည်သို့မည်ပုံ sarcoidosis အကြောင်းပိုမိုနားလည်ရန်ကျယ်ပြန်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးဘို့ကောက်ယူနေပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး: SarcoidosisUK uses the personal information we collect about you to help better administer and further our research programme. SarcoidosisUK or our Trusted Research Partners may need to contact you to discuss your answers or the results of the research.
အထိခိုက်မခံ: SarcoidosisUK ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနနောက်ထပ်နှင့် sarcoidosis နှင့်မည်သို့ကြောင့်လူနာအပေါ်သက်ရောက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်စုဆောင်းသည့်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်အသုံးပြုသည်။ သငျသညျပေးကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနနှင့်စပ်လျဉ်းအရေးကြီးသောမေးခွန်းများကို၏ကျယ်ပြန့ဖြေဆိုခြင်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website မှတဆင့်သို့မဟုတ်တစ်စက္ကူပုံစံဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်းသုတေသနတွင်ပါဝင်ရန်သောအခါအသင်သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကို SarcoidosisUK အတူမျှဝေ။
သင်သည်သင်၏ sarcoidosis အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကနှင့်အတူများကိုဘယ်လိုသင်ထိခိုက်နေသည်
သင့်ရဲ့ sarcoidosis အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကနှင့်သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များကိုဘယ်လိုသင်ထိခိုက်နေသည်
သင့်ရဲ့ sarcoidosis အကြောင်းပိုမိုနားလည်
sarcoidosis နှင့် SarcoidosisUK အကြောင်းပိုမိုနားလည်
SarcoidosisUK အထွေထွေဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းများ (GDPR) ၏အပိုဒ်6မှာထွက်မသတ်မှတ်အဖြစ်အောက်ပါအပျသညျဟုအခြေခံအောက်မှာဒေတာစုဆောင်းနှင့် process လုပ်တယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို processing များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အရာကိုပြုသင့်သည်အခြေခံတရားဝင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။
တရားဝင်အကျိုးစီးပွား: သူတို့အားတရားဝင်အကျိုးစီးပွားပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သည်သောတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်မဟုတ်လျှင်အပြောင်းအလဲနဲ့ SarcoidosisUK ရဲ့တရားဝင်အကျိုးစီးပွားတစ်ခုသို့မဟုတ်တတိယပါတီများ၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သူသည်ကျနော်တို့ (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အထိခိုက်မခံ) နဲ့သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဝေမျှသလဲ?
We will only share your personal and sensitive information within SarcoidosisUK, with your medical team and in some cases with our Trusted Research Partners.
ငါတို့သည်သင်တို့၏ကြိုတင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ဘယ်မှာပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်သောနှင့်အတူ မှလွဲ. အခြားမည်သည့်တတိယပါတီများမှမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်သည်ဖော်ထုတ်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုထုတ်ဖော်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်ကြည့်ရှု ပေါ်လစီကာကွယ် SarcoidosisUK.
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အထိခိုက်မခံ) ကာကွယ်ပေးသလဲ?
ငါတို့သည်သင်တို့၏သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့တင်းကျပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လုံခြုံရေး features တွေကိုသုံးပါ။ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ဖော်အချက်အလက်များဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်သင့်လျော်သောဆောင်ရွက်မှုများကိုယူ:
, လုံခြုံတိကျမှုနှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်ထား
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတတျနိုငျဆုံးနေစဉ်, ငါတို့သည်အသင်တို့ post မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအာမခံချက်အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုတခြားနည်းလမ်းဖြင့်ထုတ်လွှင့်လို့မရပါဘူး။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဒါလုပ်ပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏သတင်းအချက်အလက် (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အထိခိုက်မခံ) ဘယ်လောက်ကြာကြာစောင့်ရှောက်သလဲ?
ကျနော်တို့မှန်မှန်ငါတို့သည်သင်တို့၏သတင်းအချက်အလက်ကိုင်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးပြန်လည်သုံးသပ်။ ကျနော်တို့တရားဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဌာန်းတာဝန်ဝတ္တရားဖြည့်ဆည်းဖို့သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုအမျိုးအစားများကိုကိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့ကဲ့သို့ရှည်လျားသောရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်လိုအပ်သောဘို့ငါတို့စနစ်များပေါ်တွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာများနှင့်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်ကိုင်ထားလိမ့်မယ် - သင်တစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရဟုဝန်ခံလျှင်ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာအထိဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျတဖနျသငျသညျကိုဆက်သွယ်မှကိုမေးမြန်းလာလျှင်ကျွန်တော်အသတ်မရှိတစ်ဦးစံချိန်ကိုကိုင်ထားလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုမရှိတော့လိုအပ်ပါသည်ဘယ်မှာကျွန်တော်တစ်ဦးလုံခြုံတဲ့နည်းလမ်းထဲမှာများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးပါလိမ့်မယ်။
SarcoidosisUK GDPR ပုဒ်မ5(1) (င) နှင့်အညီသတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်ပါသည်။
SarcoidosisUK is not responsible for any third-party content or privacy practices accessible through our Trusted Research Partners unrelated to the SarcoidosisUK Research in which you may be participating. We do not necessarily endorse the services, content or otherwise opinions of these partners.
သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာများနှင့်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. အောက်ပါအခွင့်အရေးများရှိသည်။
သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်စဉ်းစားသို့မဟုတ်မည်သည့် SarcoidosisUK သုတေသနစီမံကိန်းများတွင်ပါဝင်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျပိုင်ခွင့်ရှိသည်:
အဘယ်သူမျှမကြိုတင်အသိပေးသို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်လိုအပ်ပါဝင်နှင့်သင့် information- မျှဝေရပ်တန့်
အဆိုပါ SarcoidosisUK ရုံးဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုဖျက်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံ (info@sarcoidosisuk.org)
request to know which individuals my data is being shared with within SarcoidosisUK
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ဖျောက်ဖျက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုရန်; သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်သတ်ထားရန်, သို့မဟုတ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်ကွက်ရန်
If you want to exercise these rights, please email info@sarcoidosisuk.org. Depending on the request, it may be necessary to send copies of2separate identification documents such asapassport, driving licence, or utility bill. The first should give photo identification and the second confirm your address. Please also give information about the nature of your contact with us, to help us locate your records. Alternatively, you can send the documents by post to: The Data Protection Officer, SarcoidosisUK, 214 China Works, 100 Black Prince Road, London, SE1 7SJ.
ငါတို့သည်သင်တို့၏ကျမ်းစာ၌ရေးထားတောင်းဆိုမှုကိုနှင့်သင့်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူလက်ခံရရှိတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့သည်ရက်ပေါင်း 30 အတွင်းကိုတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။
သည်အခြားဆက်စပ် SarcoidosisUK မူဝါဒများ
SarcoidosisUK သူနာပြုတိုင်ကြားမှုဝန်ဆောင်မှုစံချိန်စံညွှန်း (လျှို့ဝှက်နှင့်ဒေတာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒအပါအဝင်မူဝါဒနှင့်သတင်းအချက်အလက်စံနှုန်းများပေါ်လစီကာကွယ်)
ဤမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်:
214 China Works
020 3389 7221
သငျသညျဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်အကြံဉာဏ်ကိုရမှသို့မဟုတ်သို့ data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအစီရင်ခံနိုင်သည်
တိုင်ကြားမှု: 0303 123 1113
ဗြိတိန်နိုင်ငံပြင်ပမှာမှ: +44 1625 545 745
ကျနော်တို့သင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးကြောင်းသေချာစေရန် cookies များကိုအသုံးပြုပါ။ ဆက်လက်သို့မဟုတ် cookies တွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန် '' ဆက်ဖတ်ရန် 'ရန်' အိုကေ '' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။OKဆက်ဖတ်ရန်